ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: December 2008
ကမောက်ကမ ၂၀၀၈ ၊ Odd stories in 2008
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကုန်ဆုံးတော.မယ်.အချိန်မှာဒီနှစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ.တဲ.ကဘောက်တိ
BERLIN - WHETHER smashing plates in San Diego to relieve frustration or drinking 'Bailout Bitter' beer in Canada sold asa'bitter ale for bitter times", people the world over keptasense of humour in 2008 despite financial woes.
Some of the year's top off-beat tales includedaCanada brewery that createdaspecial tough times bitter and 'Sarah's Smash Shack' in California, which charges patrons US$10 (S$14.40) for 15 minutes of pleasure pulverising dinnerware againstawall.
အမေရိကန်ကအာမခံကိုယ်စားလှယ် Adam Dewitt ကတော.သူ.ဇနီးနဲ.ဒေါ်လာ ၅၀ ဖိုးပန်းကန်တွေ
'It was the best $50 we've spent in the last two years,' said insurance broker Adam DeWitt, who smashed plates in San Diego with his wife after his home mortgage loan was rejected.
ကုန်လွန်တော.မယ်. ၂၀၀၈ ကိုပြန်လှည်.ကြည်.လိုက်ယင်တော.ဒီငွေကြေးအခက်အခဲမတိုင်မီရော
လွန်ခဲ.တဲ.မေလတုန်းကဆိုယင် Wall Street လို.ခေါ်တဲ.ကမ္ဘာ.ငွေကြေးစတော.ရှယ်ရာဈေးကွက်
ရှိတဲ. New York ကစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကဘာဂါအသားညှပ်မုန်.ကို ၁၇၅ ဒေါ်လာနဲ.ကမ္ဘာ.
In May,aWall Street restaurant boasted it was selling the costliest burger in New York, with the US$175 patty made of Kobe beef, black truffles, seared foie gras and flecks of gold leaf.
ရှင် Heather Tierney ကဆိုပါတယ်။စားသုံးသူကံကောင်းအဆင်ပြေတဲ.နေ.မှာသူ.ကိုအထူးအစီအစဉ်
'Wall Street has good days and bad days,' said Heather Tierney at her Wall Street Burger Shoppe. 'We wanted to have something special if you really haveagood day on Wall Street.'
ကာဇက်စတန် ( Kazakhstan ) နိုင်ငံကဘဏ်တစ်ခုကတော.၀င်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးသိန်းနဲ.အ
အစစ်နဲ.လုပ်ထားတဲ.ဓါး၊ခရင်း၊ဇွန်း၊ပန်းကန် ၁၃ု ခုပါစားပွဲခုံတစ်စုံစာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ.
One bank in Kazakhstan offeredadiamond-encrusted credit card for well-heeled clients with incomes over US$300,000. A jeweller in Tokyo kept busy selling 13-piece tableware sets made of gold for US$1 million - aimed at newly rich Chinese customers.
Yet there was no need for any plates at all in Bihar, one of India's poorest states where authorities encouraged people to eat rats to fight rising food prices and save grain stocks.
They praised rat meatahealthy alternative to rice.
စနစ်ကိုပိုင်းခြားဝေဖန်ထားတဲ. Das Kapital စာအုပ်အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်နေတာကပြသနေပါတယ်။
In Germany, the crisis sparked an unlikely revival of interest in Karl Marx, the founding father of communism whose heavy analysis of capitalism 'Das Kapital' becameatop seller.
'Bailout' was crowned as the US word of the year, and the financial crisis also had implications in Russia where vodka consumption fell sharply and the National Alcohol Association lobby group in Moscow said vodka stockpiles were six times higher than usual.
တာပါပဲ။တရုတ်ပြည်ကကမ္ဘာ.အရပ်အရှည်ဆုံးလူသား Bao Xishun ကတော.သားဦးလေးရလို.ကမ္ဘာ.
But away from the financial turmoil, the world had its usual slew of whacky news as well in 2008. In China, the world's tallest man, Bao Xishun, became the world's tallest father with the birth of his first child.
ကအိမ်သာထဲကိုတောင်မ၀င်နိုင်လောက်အောင် ၂၁၀ ကီလိုအထိဝလွန်းလို.ထောင်ကနေလွှတ်ပေး
In Italy,aman accused of beingaMafioso got out of prison afteracourt ruled he was too fat for jail. Guards said the 210kg man could not fit through the bathroom door.
တရုတ်ပြည်စီချွမ်ပြည်နယ်မှာလှုပ်ခဲ.တဲ.ငလျင်မှာအပျက်အစီးတွေထဲမှာရက်ပေါင်း ၃၆ ရက်ကြာအောင်
In China,apig that survived 36 days buried in the Sichuan earthquake rubble was voted the country's favourite animal. But he suffered the curse of celebrity: he was later criticised for basking in the limelight while growing fat and bad-tempered.
လက်ပူးလက်ကြပ်မိသွားတာခံရပြီးအင်္ဂလန်ကဘွားသက်ရှည်တစ်ယောက်ကတော.သူမရဲ. ၁၀၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ.မင်္ဂလာကိုအပျိူစင်ဘ၀အဖြစ်နဲ.ကျင်းပနေခဲ.ပါတယ်။သူမကဒီလိုအသက်ရှည်ရတဲ.
An Australian outback mayor won the country's outrageous sexism award for urging lovelorn female 'ugly ducklings' to move to his remote mining town, where men outnumber women 5-1.
သူက မကျည်းတန်တွေအနေနဲ. Mount Isa လို.ခေါ်တဲ.သူ.မြို.ကိုလာရောက်သင်.ပါတယ်လို.ဖိတ်ခေါ်
He said: 'Beauty-disadvantaged women should proceed to Mount Isa.'
လူတိုင်းကတော.အရာရာကိုရယ်စရာဟာသမလုပ်နိုင်ပေဘူးပေါ.။ဆီနီဂေါနိုင်ငံကအသက် ၇၀ အရွယ်
ရှိအဖိုးအိုတစ်ဦးကတော. (cranky old man) "ဒီအဖိုးကြီးကြောင်နေပြီ " ဆိုတဲ.စာသားဟာသူ.ကို
But not everyone managed to keepasense of humour. In Senegal,a70-year-old man used his hunting rifle to shoot atarap group ataconcert because he felt their lyrics - abouta'cranky old man' - were insulting him. Five people were injured. -- REUTERS
Posted by Unknown | at 8:10 AM |0comments
Labels: source :the straitstimes
အလုပ်တော့အလုပ် . . . သို့သော်
ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ နိုင်ငံ ခြားသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အ ကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးလေးတွေ ဖတ်ရတော့ ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ဆိုင် တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ရေးချင် လာပါတယ်။ ရေးသင့်၊ မရေးသင့် အရင်စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတွဲ (၄)၊ အမှတ် (၈)Weekly Eleven ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးက "အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းနှင့်လစာ မြင့်မားမှုမက်လုံးဖြင့် ငယ်ရွယ်သူ အမျိုးသမီးများအား အဓိကပစ်မှတ် ထားသည့် အသွင်သစ်လူကုန်ကူးမှု များ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိ လာနိုင်" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းဖတ် လိုက်ရတော့ ရေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းကလေးသူငယ် ချင်းတော်တော်များများ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ အားတက်သရော ဆန္ဒရှိကြသလို မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်း အသင်းတွေကလည်း အားပေးကြ ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ပညာသင် ဖို့၊ တချို့လည်း အလုပ်လုပ်ဖို့ ရည် ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ပါ။ ပညာသင်ပြီး ဆုံးတဲ့သူတွေကလည်းရာထူးကောင်း၊ လစာမြင့် အလုပ်တွေရဖို့ မျှော်လင့် ချက်နဲ့ ထပ်ကြိုးစားရပြန်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်လည်း နိုင်ငံခြားအ လုပ်သွားလုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေး နေတဲ့အလုပ်အေဂျင်စီတွေကလည်း ပေါများလာသလို လုပ်ငန်းခွင်အ တွက် လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေက လည်း လက်ညှိုးထိုးမလွဲနိုင်အောင် ပင်။ သင်တန်းတချို့ကလည်း လုပ် ငန်းခွင်ပညာရပ်တွေကို သင်ကြား ပေးတဲ့အပြင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လမ်းရဖို့အတွက်လည်း ကူညီပေး မယ်ဆိုပြီး အပြိုင်ကြော်ငြာလာပါ တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ဒေ သတွင်းနိုင်ငံတွေဆီမှာ စီးပွားရေးအ ခက်အခဲရှိနေချိန်ဆိုတော့ အလုပ် ရ ဖို့အခွင့်အရေးက အရင်ထက်ပိုနည်း လာပေမယ့် အလုပ်သွားလုပ်မယ့်သူ တွေကတော့ လျော့နည်းမသွားပါ ဘူး။ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်လေး ရ၊ ဘာသာစကားနည်းနည်းပါးပါး ပြောတတ်ပါက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် ရဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများတယ်လို့ထင် ထားတတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မလည်းအရင်ကဒီလိုထင် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လွန်ခဲ့ တဲ့လပိုင်းအတောအတွင်း နိုင်ငံခြား သွားအလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ ကျွန်မနဲ့မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူ ငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့ညီမမှ တစ်ဆင့် သူ စင်ကာပူမှာရောက်နေ ကြောင်း၊ သူ့သူဌေးက အသက် ၂၅ နှစ်ဝန်းကျင်မိန်းကလေးအယောက် ၂၀ စာအတွက်အလုပ်ခေါ်ပေးဖို့ပြော လို့ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါက လုပ်နိုင် အောင်သတိတရနဲ့လှမ်းဆက်သွယ် ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မလည်း သူငယ် ချင်းအီးမေးလ်လိပ်စာတောင်းထား ပြီး လှမ်းဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ မေးလ် ထဲမှာ "စားသောက်နေထိုင်ဖို့အတွက် တာဝန်ယူတယ်။ လစာက စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၃၀၀ နဲ့ ၄၀၀ ၀န်းကျင်ရ မယ်။ Passport မရှိလည်း လုပ်ပေး မယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ခ၊ Passport လုပ်ခတွေကို ချေးပေးထားပြီး နောက်မှ လစာတွေကနေ ပြန်ဆပ် နိုင်တယ်။ လိုအပ်တာတွေကို ပြင် ဆင်ပေးထားမယ်။ တခြားစိတ်ဝင် စားတဲ့သူတွေကို ဆက်သွယ်ပေးရင် ဆက်သွယ်ခအဖြစ် တစ်ယောက်ကို ကျပ် ၅၀၀၀၀ ပေးမယ်" ဆိုပြီး ရေး ထားပါတယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုး၊ ဘယ်နေရာမှာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို တော့ရေးမထားပါဘူး။ ကျွန်မ လည်းသေချာမသိရလို့ ထပ်အဆက် အသွယ်မလုပ်ခဲ့မိဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ် လလောက်ကတော့ သူငယ်ချင်းက ဒီမှာပြန်လာပြီး Passport သက်တမ်း တိုးရင်း လူချင်းလာတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ သူပြောတဲ့အလုပ်ကိစ္စ ကို သေချာထပ်မေးကြည့်မိတယ်။
အရင်ဆုံး ကျွန်မက နိုင်ငံခြား မှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် LCCI, Hotel Management, Tourism စတဲ့ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်တွေရှိရမှာ လားမေးတော့ သူ့အလုပ်က "ဒီလက် မှတ်တွေသိပ်မလိုပါဘူးတဲ့။ အင်္ဂလိပ် စကား အသင့်အတင့်ပြောတတ်ရင် ရပါပြီ။ ကျန်တာ ဟိုရောက်မှ သူ့ ဘာသာလုပ်ရင်းကိုင်ရင်း သဘော ပေါက်သွားလိမ့်မယ်"ဆိုပါတယ်။ "ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲ" ထပ်မေးတော့ "housekeeping"ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ 'housekeeping ဆိုတော့ ဟိုတယ်မှာ လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား" ထပ်မေး တော့ "ဟိုတယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ် မှာလုပ်ပေးရမှာ။ လုပ်စရာလည်း သိပ်မရှိပါဘူး။ ဖုန်စုပ်စက်နဲ့ ဖုန်စုပ်၊ အ၀တ်လျှော်စက်နဲ့လျှော်၊ မီးပူ လေးတိုက်ပေး၊ ကလေးရှိရင် ကားနဲ့ ကျောင်းပို့၊ ကျောင်းကြိုရတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ရက်နားခွင့်ရှိတယ်။ နားတဲ့ရက်မှာသင်တန်းတက်ဖို့အချိန် ပိုင်းသင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒီသင်တန်းတွေက ဒီပလိုမာလက် မှတ်တွေယူပြီး တခြားအလုပ်ပြောင်း လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်။
လောလောဆယ် ဒီအလုပ် လေးကို အစပျိုးလုပ်ထားပြီးနောက်မှ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ တခြားအလုပ် ထပ်ရှာ၊ သူလည်း ဒီအလုပ်လုပ်ပြီး အချိန်ပိုင်းသင်တန်းတက်နေတယ်။ စားဖို့၊ နေဖို့ကို အိမ်ရှင်က တာဝန်ယူ ထားတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံ ချက် ပြုတ်စားသောက်နိုင်တယ်။ နောက် ပိုင်း အဆက်အသွယ်ကောင်းရသွား ရင် အခြားနေရာတွေမှာ သွားလုပ်လို့ ရတယ်"ဆိုတာ ကျွန်မကို ရှင်းလည်း ရှင်းပြ၊လုပ်ဖို့လည်းအားပေးပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် ရန်ကုန်ပြန်ရောက် တော့ အိမ်နီးနားချင်းသူငယ်ချင်း လေးယောက်အပြင် ညီမ၀မ်းကွဲနှစ် ယောက်ကလည်း စိတ်ဝင်စားလို့ သူ တို့ကိုခေါ်သွားရင်း ကျွန်မပါစိတ်ဝင် စားရင်လိုက်ခဲ့ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ကျွန်မ သူပြောတဲ့အလုပ်ကိုသိ ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို အံ့သြမဆုံးလည်းဖြစ်မိတယ်။ ဘာ လို့လဲဆို ကျွန်မသူငယ်ချင်းက ရန် ကုန်မှာနေတုန်းက လူလတ်တန်းစား ထဲကပါ။ B.Sc ဘွဲ့တစ်ခုရထားတဲ့ အပြင် LCCI အောင်လက်မှတ်၊ တရုတ်စကားပြောလည်းတတ်ပါ တယ်။ အိမ်မှာ အင်္ကျီဆိုင်လေးတစ် ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ ဆိုင်အတွက် လို အပ်တဲ့အင်္ကျီတွေကို မူဆယ်ထိကိုယ် တိုင်သွားပြီးဝယ်တဲ့အပြင် ဈေးပလာ ဇာတွေမှာလည်း ပြန်သွင်းတဲ့အခါ ပြန်သွင်းပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်လေး ရှိပြီး ပညာအရည်အချင်း အသင့် အတင့်ရှိထားတဲ့သူငယ်ချင်းက နိုင်ငံ ခြားမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်က အိမ်အကူ သဘောအလုပ်မျိုးဆိုတော့ ကျွန်မ ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ကျွန်မ ကြီးကျယ်တာတော့မဟုတ်ပါ ဘူး။ သူငယ်ချင်းကို အကြောင်းပြ ချက်တစ်ခုပြပြီး ငြင်းလိုက်ပါတယ်။
သူကတော့ ကျွန်မစိတ်မ၀င်စားရင်၊ တခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိရင် အချိန် မရွေးဆက်သွယ်နိုင်အောင် ရန်ကုန် လိပ်စာအပြင် စင်ကာပူက သူ့ဟန်း ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။
စင်ကာပူပြန်သူငယ်ချင်းနဲ့ housekeeping အလုပ်အကြောင်းသိ ရပြီး သိပ်မကြာပါဘူး။ နောက်ထပ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ကြ တော့ "ဘာလုပ်နေလဲ"မေးမိတယ်။ သူက "အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတယ်" တဲ့။ "ကောင်းတယ်ပေါ့၊ ဘယ်သူ တွေကို သင်ပေးနေတာလဲ"ထပ်မေး တော့ "နယ်ကနေစင်ကာပူမှာအလုပ် သွားလုပ်မယ့်သူတွေကို သင်ပေးနေ တာ"တဲ့။ သူ့အဒေါ်က နယ်ကအမျိုး တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့သမီးတွေကို စင်ကာပူပို့ပေးပြီး အလုပ်သွင်းပေး နေတယ်"လို့ပြောပါတယ်။ အေဂျင် စီနဲ့လုပ်ရင် ၀န်ဆောင်ခက တော် တော်လေးပေးရပေမယ့် သူ့အဒေါ် ကတော့ တစ်ယောက် ၅၀၀၀၀ ကျပ် နဲ့လုပ်ပေးနေတာ"လို့ ဆိုပြန်တယ်။ ဘာအလုပ်လဲမေးတော့ housekeeping ပါတဲ့။ လာပြန်ပါပြီ။ နောက် တစ်ယောက်ကလည်း housekeeping တဲ့။
ံHousekeeping ကို အင်္ဂလိပ်- မြန်မာအဘိဓာန်ထဲမှာ "အိမ်မှုရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ယင်းအတွက် ခွင့်ပြုထား သည့်ငွေကြေး၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် တွင် ထိန်းသိမ်းမှု၊ မှတ်တမ်းတင် ထားရှိမှုလုပ်ငန်းများ"ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ စင်ကာပူက Housekeeping စာမေးပွဲကို အရင်ဖြေ ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မေးခွန်း ဟောင်းတွေ၊ အင်္ဂလိပ်စာစကားပြော တွေအတွက် သူက သင်ပေးနေတာ ပါလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအလုပ်အကြောင်း ကိုရှင်းပြခိုင်းတော့ "စာမေးပွဲက အ မှတ် ၅၀ ဖိုးမေးထားပြီး အမှတ် ၃၀ ရရင် အောင်တယ်။ မေးခွန်းတွေက အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသဘောတရား တွေမေးထားတာ။ စာမေးပွဲအောင် ရင် အလုပ်လုပ်ရပြီး အလုပ်ပါမစ် (work permit) နှစ်နှစ်ရတယ်။ တစ် အိမ်ကနေ သုံးအိမ်ထိပြောင်းလုပ်လို့ ရတယ်။ စားသောက်နေထိုင်စရိတ် စီစဉ်ပေးတယ်။ လခက စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ၀န်းကျင်ရတယ်" ဆို ပြီးရှင်းပြပါတယ်။ ကျွန်မလုပ်ဖို့စိတ် ၀င်စားရင်သူ့အဒေါ်ကိုပြောပေးမယ် လို့ဆိုပါတယ်။
သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီအလုပ်ကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲမသိပါဘူး။ ကျွန်မကတော့ နိုင်ငံခြားသွားအလုပ် လုပ်မယ့်သူတွေအတွက် ကိုယ်ဆည်း ပူးခဲ့တဲ့ပညာ၊ ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဝန်း ကျင်တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေ ချင်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေ၊ ရင်း နှီးလိုက်ရတဲ့ငွေကြေး၊ အချိန်တွေ ဟာ နောက်ငါးနှစ်၊ ဆယ်နှစ်မှာကိုယ့် အတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးအမြတ် တွေရလာနိုင်မလဲ။ "တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်"ဆိုပြီး ပြောင်းသွား ပြီးမှ "သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း" ဆိုတဲ့ စကားပုံမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါ။ ဒီလိုဆို နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ် သူတွေကို အပြစ်တင်နေတာလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာပြည့်ဝပြီး လုပ်ငန်းခွင် သင့်တင့်တဲ့နေရာ၊ ရာထူးရထားတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ၀မ်းလည်းသာ၊ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။ သူများနိုင်ငံ မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေက နေရာ တစ်နေရာရထားတယ်ဆိုတာ ဂုဏ် ယူစရာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပညာရေးက အခြေခံ၊ ဘာသာစကားက နည်း နည်းပါးပါးတတ်၊ နှစ်လပြတ်၊ သုံး လပြတ်သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိ ထားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ နိုင်ငံ ခြားမှာ အဆင်ပြေစွာရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ အလှမ်းနီးမလား၊ အလှမ်း ဝေးမလားဆိုတာ သေချာစဉ်းစားစေ ချင်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး ကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လစာကောင်း လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားသွားအလုပ် လုပ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ သူများတွေ ပြောလို့ တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့် ကြားထားတဲ့ သွားရည်ယိုစရာ အခွင့်အရေးတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး သွားမိပြီးမှ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတဲ့အခါ ထပ်တူမညီခဲ့လျှင်တော့ ...။ ။
Weekly Eleven Journal မှဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
keeping ဆိုတာနဲ.တစ်ကယ်.ဟိုတယ်က housekeeping အလုပ်နဲ.ကအခြေခံခြင်းတူပေမယ်.သူတို.
ဒူဘိုင်းနဲ.အာရပ်နိုင်ငံရောက်အိမ်ဖော်များနဲ.ပါတ်သက်လို.တော.ကျွန်တော် ဒီပို.စ် မှာရေးခဲ.ဘူးပါတယ်။
Posted by Unknown | at 1:25 AM |0comments
US mum has her 18th child
Happy family ... Michelle Duggar is surrounded by her children and husband Jim Bob
ထူးထူးဆန်းဆန်းသူတို.ရဲ.သားသမီး ၁၇ ယောက်စလုံးရဲ.နာမည်တွေဟာ J နဲ.စတဲ.အမေရိကန်နိုင်ငံမှ
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိူးသမီးတစ်ဦးဟာ ၁၈ယောက်မြောက်ရင်သွေး၊သမီးလေးကိုလဲ Jordyn -Grace
Makiya Duggar လို.အမည်ပေးကာမွေးဖွားခဲ.ပြန်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူ အသက် ၄၂ နှစ်ရှိသူ Michelle Duggar ဟာ ၇ပေါင်
နဲ. ၃ အောင်စ အလေးချိန်ရှိတဲ.သမီးလေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ အာကင်ဆောပြည်နယ်မှာဗိုက်ခွဲပြီးမွေး
ကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲလို. သား ၁၀ ယောက် သမီး ၈ ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ.ဖခင် Mr Duggar
အသက်အကြီးဆုံးကလေးက အသက် ၂၀ ဖြစ်ပြီးအသက်အစဉ်အလိုက်ကတော.အောက်ပါအတိုင်းပါ။
Joshua , 20 ,Jana, 18, John-David, 18, Jill, 17, Jessa, 16, Jinger, 14,Joseph, 13, Josiah, 12, Joy-Anna, 11; Jeremiah, nine, Jedidiah, nine, Jason, eight, James, seven, Justin, six, Jackson, four, Johannah, three, and Jennifer, one , Jordyn Grace ( just born ).
A WOMAN who has already had 17 kids with names beginning with the letter J has given birth to her 18TH child –agirl named Jordyn-Grace Makiya Duggar.
Devout Christian Michelle Duggar, 42, delivered the baby girl by Caesarean section yesterday in Arkansas, US.
The baby weighed 7lbs, 3oz (3.26kg) and was 20 inches long.
“The ultimate Christmas gift from God,” said dad Jim Bob Duggar.
“She’s just absolutely beautiful, like her mom and her sisters.”
The Duggars now have ten sons and eight daughters.
Jim Bob, 43, said Michelle started having contractions on Wednesday night.
Jim Bob said both baby and mother were doing well.
He said: “We both would love to have more”.
The couple's oldest child, Joshua, is 20.
The other Duggar children, in between Joshua and Jordyn-Grace, are Jana, 18, John-David, 18, Jill, 17, Jessa, 16, Jinger, 14,Joseph, 13, Josiah, 12, Joy-Anna, 11; Jeremiah, nine, Jedidiah, nine, Jason, eight, James, seven, Justin, six, Jackson, four, Johannah, three, and Jennifer, one.
The Duggars, who have their own TV show in the US, refuse to use any form of contraception and say each child is gift from God.
Posted by Unknown | at 8:32 AM |0comments
ကွန်ပြူတာအထူးပြုချက်သုံးထားတဲ.ဓါတ်ပုံ photo shot
စာဖတ် ပရိသတ်များ အတွက် လူ့ဘဝ ရရှိသော်လည်း ကံ၊ ကံ၏ အကျိုး ပဋိသန္ဓေ အကြောင်းနှင့် ဆက်နွယ်ကာ သံဝေဂ ရရှိစရာ ပုံရိပ်ကို ဖွင့်ဖော် ပြရလေသည်။ ပြည်ပရောက် 'တူလေး' လင်းလင်းမှ ...
အင်တာနက်မှ ပေးပို့လိုက်သော ထူးခြား လူသား နှစ်ဦး၏ ပုံကို ကြည့်ရှုရင်း သာမန်အမြင်၊ အသိဖြင့် မမြင် ကြည့်ကြပဲ တရားသဘော တရားသံဝေဂ အမြင်၊ အသိဖြင့် ကြည့်ရှုကာ အပ္ပမာဒေဋ္ဌ သမ္မာဒေဋ္ဌဖြင့် လူ့ လောကီ ဘုံဘဝမှာ စီးပွားရေး၊ ဥစ္စာ၊ လူမှုကိစ္စများ ရွက်ဆောင်ရင်းလည်း မိမိ တတ်နိုင်သမျှ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ မှုများကို ကုသလ စွမ်းအားနှင့် ရွက်ဆောင် ကြစေချင်သည်။ ယခု ဓာတ်ပုံပါ လူသားမှာ အီရှန် နိုင်ငံသား၊ ပါရှန်းလူမျိုး ဖြစ်လေသည်။ ယောင်္ကျားဘဝ လူသားဘဝကို ပိုင်ဆိုင် ရရှိသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် အထက်ပိုင်း ပါရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်း မပါရှိပဲ တစ်ဦး၏ ဝမ်းဗိုက် အရှေ့ပိုင်းမှ နောက်တစ်ဦး၏ နောက်ကျောပြင်က တစ်ဆက်တည်း ခန္ဓာကိုယ်ခြင်း ဆက်နေလေပြီး လမ်းသွားလျှင် ကျန်တစ်ဦးက လက်နှင့် ထောက်၍ လှမ်းရသည်။ သူတို့မှာ တင်ပဆုံပိုင်း၊ ပေါင်တံ၊ ခြေထောက် မပါသလို၊ ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ်စွန့်ရန် အင်္ဂါ မပါရှိပေ။ ယခုအရွယ် အထိ၊ အသက်ရှင် နေထိုင်ပုံမှာ တစ်ဦးစားသော အစာသစ်ကို အစာဟောင်း အဖြစ် စွန့်ချင်လျှင် ပုံမှာ မြင်တွေ့ရသည့် အတိုင်း ကျန်တစ်ဦး၏ ပါးစပ်မှ မစင်ကို စွန့်ထုတ် ပစ်ရလေသည်။ လူဖြစ်ရသော်လည်း သူများကဲ့သို့ အင်္ဂါ မစုံလင်သည့် အပြင် လူတောထဲ သွားလာနိုင်သော ဘဝမျိုး မဟုတ် ဒါတင်မက လူဟုသာ ဆိုသည် မစင်ကို ပါးစပ်မှ စွန့်ထုတ်ရသော ဝဋ်ကြွေးဒုက္ခ ကြီးမားပုံကို တွေးဆ ဆင်ခြင် ကြည့်ပါကုန်။
သာမန် လူဘဝမှာတောင် မစင်နံ့ ရယုံမျှနှင့် ပျို့ချင်၊အန်ချင်၊ နှာခေါင်းပိတ်၍ ဝေးရာကို ပြေးရလေသည်။ ထိုသူတို့၏ နိစ္စဓူဝ ခန္ဓာကိုယ်ရှိက ဒုက္ခဝေဒနာကို တွေးဆကြပါကုန်၊ ထိုပုံကို ကြည့်ပြီး ကလေးတွေက အထူးအဆန်း သဖွယ် သဘောကျ ရယ်မော ကြည့်ကြသလို တွေးတတ်သော ကလေးက ''သူတို့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ကိုယ်ခန္ဓာကြီး ဖြစ်နေရတာလည်းဟင်'ဟု မေးလေတော့သည်။
''သိပ္ပံပညာအရ ကြည့်ပါလျှင် အမိမျိုးဥနှင့် အဖ မျိုးဥတို့ ဆက်သွယ်၍ ရရှိလာသော ရုပ်ဗီဇ ကလပ်စည်းများ တိုးပွားလာပြီး ''ရုပ်ခန္ခာ''တည်ဆောက်မှု သဘောတရား အရ အကြောင်း အားလျော်စွာ တွဲ၍ ရုပ်ခန္ဓာ ဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ သိပ္ပံပညာက ရုပ်ဗီဇ အကြောင်းကိုသာ အဖြေရှာနိုင်ပြီ။ နာမ်ဗီဇ မျိုးစေ့ အကြောင်းကို မသိရှိနိုင်ပေ။
ထိုအဖြေကို သမ္မာသမ္ဗုဒ္စ ဘုရားရှင် ဖွင့်ဖော် ဟောကြား ဆုံးမခဲ့သည့် သဘာဝ ဓမ္မတို့၏ သိမ်မွေ့ နူးညံ့သော မြင့်သော တရား မြတ်သော တရားတွင် သတ္တဝါတို့၏ 'ကံ'နှင့် ကံ၏ အကျိုး၊ ကံစွမ်းအားများ အကြောင်း ကုသိုလ် အကုသိုလ် ကိလေသာဝဋ်၊ ကမ္မဝဋ်၊ ဝိပါကဝဋ်ဆိုသည့် စက်သုံးပါး လည်ပတ်ပြီး နေ့စဉ် ကာယကံမှု၊ ဝစီကံမှု၊ မနောကံမှုများနှင့် မိမိခန္ဓာ ငါးပါးမှာ ကံစွမ်းအားများ ဝန်းရံလို့ နေလေသည်။
''ကံစွမ်းအားမည်သို့ ဝန်းရံနေတာလည်း''ဟု မေးလာပြန်ရာ ''သံလိုက်ဓာတ် မရှိတဲ့ ရိုးရိုး သံမဏိချောင်းပေါ်မှာ သံလိုက်ဓာတ် ပါတဲ့ သံချောင်းကို အပေါ်ကနေ ခပ်ခွာခွာ ထားပြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ ပွတ်ဆွဲ ပေးနေပါက ထိုသံချောင်းထဲသို့ သံလိုက်ဓာတ်များ စီးဝင်သွားကာ၊ သံလိုက်ချောင်း ဘဝသို့ ကူးပြောင်းပြီး သံလိုက်ဓာတ်များ ဝန်းရံနေကြောင်း မျက်စေ့နဲ့ မမြင်ရပေမယ့် သံလိုက်အိမ်မြှောင်နဲ့ ထောက်ကြည့်မှ သိနိုင်တယ်လေ။ ဒီသဘောလိုပဲ လူတစ်ယောက်မှာ သူနေ့စဉ် ပြုခဲ့တဲ့ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံမှု တွေက ကံစွမ်းအား အနေနဲ့ ဝန်းရံနေပြီး ဒီရုပ်၊ ဒီနာမ်ကို အထောက်ပံ့ ပေးနေတာပေါ့။
ဒီလို ကံစွမ်းအားတွေက အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် ကံအဆောက်အအုံပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ယောင်္ကျားဘဝ၊ မိန်းမဘဝ၊ ရုပ်ဆိုး၊ ရုပ်ချော၊ အသားဖြူတယ်၊ မည်းတယ်၊ အရပ်ရှည်တယ်၊ ပုတယ်၊ ကိုယ်အင်္ဂါ ပြည့်စုံခြင်း မပြည့်စုံခြင်း၊ လူစဉ်မမီ၊ ဥာဏ်ရည် ချို့တဲ့ခြင်း၊ ဆွံ့အ နားမကြားတာမျိုး မျက်စေ့ မမြင်တာမျိုး ခုလို ဓာတ်ပုံထဲကလို လူတော့ လူဖြစ်ပါရဲ့ လူဟု ပြော၍မရသော ဘဝပိုင်ရှင်မျိုး တွေကို ရရှိကြတာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့တဲ့ ကံစွမ်းအား၊ အဆိုးအကောင်း ပေါ်မှာ အထောက်အပံ့ အကြောင်း ဖြစ်တည်ပြီး အကျိုး ခံစားကြရတာပါ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ပါဝင်တဲ့၊ အကုသလဟိတ်နဲ့ ပဋိသန္ဓေ တည်လာရင် ယခုလို ညံ့ဖျင်းသော ဘဝကို ရောက်ရှိကြရတာပဲ။ ဒါက ကလေးတို့ နားလည်အောင် ပေါ်ယံ ပြောပြရတာ တကယ် ပြောရရင် အကျယ်ချဲ့ရင် အများကြီးပဲ၊ မြင့်တဲ့ ဘဝ၊ မြတ်တဲ့ ဘဝကို ရချင်ရင် ကာယကံမှု၊ ဝဇီကံမှု၊ မနောကံမှုတွေကို စင်ကြယ်အောင် ထားနိုင်ပြီး ဘုရားကို ဘုရားမှန်းမသိ တရားကို လေးစား လိုက်နာ ကျင့်သုံး၊ သံဃာကို ဆည်းကပ်၊ မိဘ၊ ဆရာ စကား ရိုသေ လေးစား နာခံရင်ပဲ ကောင်းတဲ့ ကုသလ ကံစွမ်းအားတွေ မိမိခန္ဓာမှာ ဝန်းရံနေပြီ။ အခုလက်ရှိ ဘဝမှာလည်း အစစ၊ အဆင်ပြေလာမယ်။ ဘေးဒုက္ခကင်းဝေးမယ်။ နောင်ဘဝ ကူးခဲ့ရင်လည်း ခုလိုမျိုး လူစဉ်မမီတဲ့ ပဋိသန္ဓေဘဝကို မရရှိနိုင်တော့ဘူး။
''ဒါဆို သမီးတို့ ကာယကံမှု၊ ဝဇီကံမှု၊ မနောကံမှုကို ကောင်းအောင် စောင့်ရှောက် နေထိုင်ရင် ရပြီပေါ့နော်''
ထို လူထူးလူဆန်း ဓာတ်ပုံကို ကြည့်မြင်ပြီး အသိ၊ သတိတရား လေးများဖြင့် ကလေးတွေကလည်း ကြိုးစား နေထိုင်ဖို့ သဘောပေါက် သွားသလို စာရေးသူတို့လည်း အားလုံးသော လူသားတိုင်း ကုသလကံ စွမ်းအားများ ဖြစ်တည်စေပြီး အကုသလ ကံစွမ်းအားများ ကင်းဝေးအောင် စောင့်ရှောက် နေထိုင်ပြီး မြင့်သောဘဝ မြတ်သောဘဝ ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစား အားထုတ် ကြပါစို့ဟု။ မေတ္တာဖြင့် ဖွင့်ဖော် လိုက်ပါတော့သည်။
Posted by Unknown | at 5:15 AM |0comments
Dubai Bubble Boom Busted ?
Posted by Unknown | at 6:08 AM |0comments
Labels: သတင်း ။ Khaleej
ကမ္ဘာ.ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ပျံကား ၊World's first flying car
World's first flying car on the roads from next year - yours for just £130,000
၁၉၈၀ ခုနှစ်များဆီကရိုက်ကူးရုံတင်ခဲ.တဲ.Back to the Future ရုပ်ရှင်ကားပေါ်ထွက်လာပြီးကတည်းက
အခုတော.နောက်လာမယ်.နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရောင်းချနိုင်တော.မယ်. Terrafugia Transition လို.အမည်
ရတဲ.ကုန်းလေနှစ်ထွေသွားမော်တော်ကား ( အရင်ကကုန်းရေနှစ်ထွေသွားယာဉ်ရှိခဲ.တယ်လေ။)ကို
လေယာဉ်မောင်းလိုင်စဉ်ရှိသူတွေအနေနဲ.ပေါင် ၁၂၇ ၀၀၀ ပေးပြီးဝယ်ယူမှာကြားနိုင်ပါပြီ။
ဆန်.ထုတ်ထားချိန်မှာ ၂၇.၅ ပေရှိတဲ.ခေါက်သိမ်းထားလို.ရတဲ.တောင်ပံတွေပါတဲ.အဆိုပါယာဉ်ဟာ
လေထဲမှာတစ်နာရီ ၁၁၅ မိုင်နှုံးနဲ. မိုင်ပေါင်း ၄၆၀ ပျံသန်းမောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉ ပေ ရှည်လျားတဲ.ယာဉ်ကိုတော.လမ်းဘေးဓါတ်ဆီဆိုင်မှာတင်ဆီဖြည်.နိုင်တာမို.ပိုင်ရှင်အနေနဲ.
အဆိုပါယာဉ်ကိုမြင်းကောင်ရေ ၁၀၀ အား ဂီယာလေးချက်နဲ. Rotax 912S အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားပါသတဲ.။
လေယာဉ်ပျံထုတ်လုပ်တဲ.အမေရိကန်နိုင်ငံ၊မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ရဲ. Woburn မှာအခြေစိုက်တဲ. Terrafugia ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ.ကုမ္ပဏီရဲ.ပြောခွင်.ရအမျိူးသမီးကတော.သူတို.ရဲ. Transition ယာဉ်ဟာ
ပြီးယင်သင်.အိမ်ကနေလေဆိပ်ကိုတိုက်ရိုက်မောင်းသွားပြီးကိုယ်သွားလိုရာကိုမိုင်ပေါင်း ၄၆၀ ဆက်
But the wings only fold out if the correct key code is entered by someone withapilot's licence .
Posted by Unknown | at 10:28 AM |0comments
Labels: news: dailymail
Posted by Unknown | at 10:53 AM |0comments
Labels: ဓါတ်ပုံသတင်း ။ Khaleej
Egyptian man offers Iraqi 'hero' his daughter, 20, as wife
Bush shoe thrower offereda'sole mate'... Egyptian man offers Iraqi 'hero' his daughter, 20, as wife
Muntadhar Al-Zeidi လို.အမည်ရတဲ.အဆိုပါသတင်းထောက်ကတော.အီရတ်ဝန်ကြီးချူပ်ထံကို
အရုပ်ဆိုးတဲ.ဒီလုပ်ရပ်ဟာခွင်.မလွှတ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ.ပေမယ်. ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုံးက၀န်ကြီးချူပ်
ပြုအမူလို.အာရပ်ကမ္ဘာကသတ်မှတ်ခံထားရတဲ. Al Zeidi နဲ.ပေးစားဖို.ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရတဲ.အီဂျစ်
လူမျိူးကောင်မလေး Amal Saad Gumaa ကလည်းဒီကိစ္စကိုသဘောတူပါတယ်တဲ.။
သူမရဲ.ဖခင်ကတော. Al Zeidi ရဲ.အစ်ကိုဆီကိုဖုံးဆက်ပြီးဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြောခဲ.တယ်လို.ဆိုပါတယ်။
သူကဆက်ပြီးတော.သူ.အနေနဲ. Al Zeidi ကိုဂုဏ်ပြုဖို.အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းက Minya တက္ကသိုလ်ရဲ.သတင်းနှင်.နည်းပညာဌာနမှာတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ.သူ.သမီးထက်ပိုပြီးတန်ဖိုး
နှက်လို.လက်နဲ.နံရိုးကျိူးတဲ.ဒဏ်ရာရထားပါတယ်လို.သတင်းထောက်ရဲ.အစ်ကိုဖြစ်သူ Durgham Zeidi ကဆိုပါတယ်။တရားသူကြီးကသာသူ.ကိုအကျဉ်းထောင်မှာသွားရောက်တွေ.ဆုံခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။
သဲသဲကွဲကွဲမသိရသေးဘူးလို. Durgham Zeidi ကဆက်ပြောပြပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲသတင်းအနေနဲ.ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းပေးဝယ်ဖို.ကမ်းလှမ်းထားတဲ.သမ္မတဘုရ်ှကိုပစ်
The Iraqi journalist who threw his shoes at George W. Bush could getawife asareward for his protest.
An Egyptian man has offered his 20-year-old daughter in marriage to Muntadhar Al-Zeidi - as it emerged the journalist has written to the Iraqi prime minister begging to be pardoned.
'Zeidi said in his letter that his big ugly act cannot be excused,' said Yasin Majeed, Maliki's media adviser.
'My hero': The 20-year-old Egyptian girl offered asawife to the man who threw his shoes at George Bush thinks he isahero
Majeed said that Zeidi added: 'But I remember in the summer of 2005, I interviewed your Excellency and you told me, 'Come in, this is your house.' And so I appeal to your fatherly feelings to forgive me.'
Zeidi's response to his marriage proposal remains unclear.
In prison: Iraqi journalist Muntadhar al-Zeidi is still being held for his shoe attack
The daughter, Amal Saad Gumaa, said she agreed with her father's idea to marry the Zeidi for his 'heroic' attack on Bush inaBaghdad press conference on Sunday.
She said: 'This is something that would honour me. I would like to live in Iraq, especially if I were attached to this hero.'
Her father, Saad Gumaa, said he had called Durgham, Al-Zeidi's brother, to tell him of the offer.
'I find nothing more valuable than my daughter to offer to him, and I am prepared to provide her with everything needed for marriage,' he added.
Al-Zeidi's gesture has struckachord across the Arab world, where President Bush is widely despised for invading Iraq in 2003 and for his support for Israel.
On Wednesday Al-Zeidi failed to appear in court, instead seeing an Iraqi judge from his jail cell.
Durgham Zeidi alleged his brother may have been too seriously injured to appear inacourtroom.
Yesterday chaos erupted in the Iraqi parliament as lawmakers argued over whether to set Al-Zeidi free.
The speaker even announced he was quitting, though officials later said he may have been upset.
Iraq officials have recommended charging Al-Zeidi with insultingaforeign leader,acharge which carriesamaximum sentence of two years imprisonment orasmall fine.
Posted by Unknown | at 12:47 PM |0comments
အမေရိကန်သမ္မတအား ပေါက်သည့် ရှူးဖိနပ်ကို ဒေါ်လာ (၁၀) သန်းပေးဝယ်မည်
အမေရိကန်သမ္မတဘုရ်ှအား ပစ်ပေါက်ခဲ့သည့် ရှူးဖိနပ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀) သန်းပေးဝယ်မည်ဟု ဆော်ဒီလူမျိုးတဦးက ကမ်းလှမ်းလိုက်သည်။
ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား အနောက်တောင်ဘက်မှ အသက် (၆၀) အရွယ် Hassan Mohammad Makhafa က အီရတ် သတင်းထောက် ပစ်ပေါက်ခဲ့သော ရှူးဖိနပ်ကို ‘လွတ်မြောက်ရေးဆုတံဆိပ်’ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ရောင်းချ၍ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၀) သန်း ပေးဝယ်မည်ဟုပြောကြောင်း Al Arabiya သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ခ်ျဒဗလျူဘုရ်ှအနေဖြင့် ၎င်းအား အီရတ်သတင်းထောက်က ရှူးဖိနပ်ဖြင့်ပစ်ပေါက်သည့် လုပ်ရပ်အပေါ် အလေးအနက်မထားကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ပြောသည်။
“သမ္မတအနေနဲ့ကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက်မထားပါဘူး” ဟု သမ္မတဘုရှ်၏ ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး Dana Perino က ပြောသည်။ ထို့အပြင် ယခု စော်ကားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အီရတ်တရားရေးစနစ်က သင့်လျော်သည့် အပြစ်ပေးမှုပြုလုပ်မည်ဟု သမ္မတဘုရ်ှက ယုံကြည်ကြောင်းလည်း Dana Perino က ပြောသည်။
မစ္စတာဘုရ်ှအနေဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်း၏ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး Dana Perino မှာမူ ဖိနပ်ဖြင့်ပစ်ပေါက် သူ သတင်းထောက်ကို တားဆီးရန်ကြိုးစားသည့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုအတွင်း ထိခိုက်ပြီး မျက်ကွင်းညိုသွားခဲ့သည်။
ဖိနပ်ဖြင့်ပစ်ပေါက်သူ သတင်းထောက် Muntadar al-Zaidi က ၎င်း၏အပြုအမှုအတွက် ယမန်နေ့၌ တရားသူကြီးရှေ့တွင် ၀န်ခံ ခဲ့ကြောင်း အီရတ်တရားရုံးချုပ် ပြောခွင့်ရသူ Abdul Satar Birqadr က ပြောသည်။ အဆိုပါ သတင်းထောက်သည် ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခြင်းခံရမှုကြောင့် လက်မောင်းနှင့် နံရိုးကျိုးသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးယိုစိမ့်မှုခံစားခဲ့ရကြောင်း ၎င်း၏ အစ်ကိုတော်သူ Dargham က ဘီဘီစီသို့ပြောခဲ့သော်လည်း ယင်းကိစ္စကို အီရတ်စစ်တပ်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
Posted by Unknown | at 10:29 AM |0comments
Labels: news: Khit Pyaing
He'sarecord brrr...eaker !!!!
Brrrr ... Wim Hof's daily ice training
ရေခဲလူသားလို.ခေါ်တွင်ခြင်းခံရတဲ.ဟော်လန်နိုင်ငံသား Wim Hof ဟာသာမာန်လူတွေ
ကျော်တည်းကလေ.ကျင်.နေခဲ.တာပါ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကရေခဲပြင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ.အာတိတ်စက်ဝိုင်းဒေ
သမှာဖိနပ်မပါခြေဗလာနဲ.မိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပြေးခဲ.တဲ.စံချိန်ကို မနှစ်က ၁၃၁.၁ မိုင်နဲ.ထပ်ပြေး
World Record မှာရေခဲပြင်အောက်အရှည်ကြာဆုံးရေကူးစံချိန်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ.နိုင်ပါတယ်။
အခုတော.သူဟာရေခဲမှတ်အောက်အနှုတ်ဒီကရီ ၂၀ ရှိတဲ.အထူးပြုလုပ်ထားတဲ.ရေခဲ
တေဇောကသိုဏ်းကဲ.သို.ဟိမ၀န္တာကယောဂအကျင်.တစ်မျိူးကိုလေ.ကျင်.နေတဲ. Whim
ရေငုပ်၊တုံးခုန်၊မီးလှုံ၊ဇယ်ခတ်လုပ်တဲ.အရည်းကြီးတွေရဲ. New Generatiion ခေတ်သစ်
THIS man can endure temperatures that would kill the average human being – and he does it for fun. Wim Hof, known as "The Ice Man", has spent the last 20 years honing his talent to be able to survive extremely cold temperatures. In January of 1999 he travelled 100 miles north of the Arctic Circle to runahalf-marathon in his bare feet, then beat his own record last year running over 131.1miles in Lapland.
Swimmer ... Hof under sheets of ice
Dive ... Wim during his 60m arctic swim
In 2002, dressed only inaswimsuit, he dove under the ice at the North Pole and earnedaGuinness World Record for the longest amount of time swimming under the ice, swimming 80meters, almost twice the length of an Olympic-sized pool.
Out ... swimmer makes it to safety
အေးဆေးပဲ၊ ဟဲ ဟဲ
And now he is set to break his own world record by submerging himself inaPlexiglas container filled with ice at temperatures as low as -20 degrees for more than an hour and 45 minutes. Wim discovered his unusual talent more than 20 years ago duringastroll in the park in his native Holland. “I hadastroll like this in the park with somebody and I saw the ice and I thought, what would happen if I go in there,” revealed the 48-year-old Dutchman. “I was really attracted to it. I went in, got rid of my clothes. "Thirty seconds I was in andatremendous good feeling when I came out and since then, I repeated it every day.”
Endurance ... during barefoot ice marathon
Whilst many scientists around the world find Wim’s ability baffling he says it is merelyacase of mind over matter.
Practice ... in his training tank
Practising an ancient Himalayan meditation called “Tummo,” or Inner Fire which is thought to generate heat, Wim now travels the world teaching the technique through his record attempts, lectures and talks. “Every body has mind power, I have learned to direct it toward my body and thus influence the cold and heating-system of my metabolism." he says. “Mind power is like electricity, it is an potential (current) which I have learned to use toward different places in my body, that is the real yoga.”
Posted by Unknown | at 11:56 AM | 1 comments
The Most Common Vegetable in the World
လွန်ခဲ.တဲ.နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကတည်းကအီဂျစ်ပြည်မှာကြက်သွန်နီကိုဟင်းချက်
ယနေ.တော.ကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်စဉ်ကြက်သွန်တန်ချိန်ပေါင်း ၂၀ ဘီလီယံပေါင်စိုက်ပျိုးထုတ်
ရောမဧကရာဇ် Nero ကတော.ကြက်သွန်မြိတ်စားယင်သူ.ရဲ.အသံကောင်းတယ်လို.ယုံ
The vegetables that are grown in the largest quantities around the world are the tomato and the potato. But the most widely used vegetable is the onion!
The onion appears in more dishes and in more countries than any other vegetable. In some places, the onion is used to flavor dishes, while in other countries it's eaten by itself asavegetable.
The ancient Egyptians ate onions both ways, for the onion was the most common vegetable in Egypt 5,000 years ago. During the Middle Ages, the onion andarelative of the onion, the leek, were the only common vegetables in Europe.
Today, more than 20 billion pounds of onions are produced around the world each year!
Emperor Nero of Rome ate leeks because he thought they would improve his singing voice
Posted by Unknown | at 1:33 PM |0comments
Labels: general knowledge: source:amazingfacts
The mobile that calls you only once
အီတလီနိုင်ငံကရဲတွေကမာဖီးယားမူးယစ်ဂိုဏ်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ.အခါ ပွိုင်. ၂၂ ကျည်ဆံ
အခုတော.အဲဒီသေနတ်ကိုအသုံးပြုပြီးပြီလားဆိုတာလေ.လာစစ်ဆေးနေပါတယ်လို. Naple မြို.ကရဲတပ်ဖွဲ.
ကပြောသွားပါတယ်။ဒီအမှုနဲ.ပတ်သက်ပြီးအခုထက်ထိတော.အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိလူတစ်ယောက်
ကဲ မိတ်ဆွေ... သင်ကော...သင်၏ချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးလှစွာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငယ်များကိုမရဏမင်း
The mobile that calls you only once:
Mafia gun was disguised asaphone
And Now Rest in Peace....on the Moon .....
Celestis လို.အမည်ရတဲ.အဆိုပါအာကသနိဗ္ဗာန်ယာဉ်လုပ်ငန်းရဲ.ခရီးစဉ်ဟာ ၂၀၁၀ ခု
နှစ်အစောပိုင်းလောက်မှာစတင်နိုင်လိမ်.မယ်လို.လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူ CharlesM.Chafer ရဲ. AFP
သတင်းဌာနကိုပေးပို.တဲ. e-mail မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်လိမ်.မယ်လို.မျှော်လင်.ယုံကြည်ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။အရိုးပြာအိုးပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်ကိုအာကာ
တစ်ဂ၇မ်မျှသာလေးတဲ.အရိုးပြာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုတင်ပို.ယင်ဒေါ်လာ ၉၉၉၅ ကုန်ကျမှာ
အရိုးပြာကိုလကမ္ဘာအထိရောက်အောင်မပို.ပဲကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပဲလွှတ်တင်
ထားမယ်ဆိုယင်ဒေါ်လာ ၇၀၀ လောက်ပဲရှိတဲ.သက်သာတဲ.ဈေးနှုံးနဲ.စတင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ပိုဝေးတဲ.ဆုံး
စမထင်အာကသစင်္ကြာဝဋာအထိဆိုယင်တော.ဒေါ်လာ ၃၇၀၀၀ အထိကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်
ကတော.အရိုးပြာထည်.မယ်.အထူးသေတ္တာတည်ဆောက်ပြီးမယ်. ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစနိုင်မှာပါ။
အာကာသယာဉ်မှူး Eugene Shoemaker သေဆုံးတော.သူ.ရဲ.အရိုးပြာအချိူ. ကိုအာကသထဲကိုဂုဏ်ပြု
ထဲကနေလကမ္ဘာရဲ.တောင်ဖက်ဝန်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကမ္ဘာ.ပထမဦးဆုံးအသုဘအဖြစ်ပြောင်းရွှေ.
မိတ်ဆွေ ၊ သင်ကောလကမ္ဘာကိုသွားဖို.စိတ်ကူးရှိပါသလား ? ။
A US funeral business that specialises in launching cremated human remains into Earth's orbit has begun taking reservations for landing small capsules of ashes on the moon, announced the company's founder. "Celestis' first general public lunar mission could occur as early as 2010 and reservations are now being taken," said CharlesM.Chafer, Celestis founder and president, in an email to AFP.
"We can send up to 5000 individual capsules to thelunarsurface," he said.
The company hopes to installacemetery on the lunar surface to hold cremated re mains of the dead, orasmaller symbolic portion of them, which one day could be visited by relatives of the deceased, said Chafer.
For transportation, Celestis has made deals with two other US private space companies, Odyssey Moon and Astrobotic Technology, which are currently working on making commercial flights to the moon. For sendingatiny, one gram portion of cremated remains to the moon, the company charges $9,995, according to Celestis' web site.
Other funeral services besides the full lunar trip include sending ash into Earth's orbit - the cheapest option, starting at $700 - and all the way up to launching remains far, far away into deep space, for which the company charges more than $37,000.
Ten years ago Nasa paid tribute to top US astrono mer Eugene Shoemaker by carrying into spaceaportion of his cremated remains.
Afterayear in lunar orbit Shoemak er's remains were intentionally planted on the moon's south pole, the first time human remains have been landed on the lunar surface - but maybe not the last time. -
Posted by Unknown | at 11:02 AM |0comments
Chinese boy has protruding heart
တရုတ်နိုင်ငံမှအသက်လေးနှစ်အရွယ်ရှိ Zhang Weiyuan ဆိုတဲ.ကောင်လေးရဲ.နှလုံးဟာမွေးက
THIS young boy risks death everyday – after being born withaprotruding heart.
Four-year-old Chinese boy Zhang Weiyuan’s heart is only protected byathin covering of skin.
And doctors have warned that any blow to the protrusion – which is about 8cm in diameter - could easily kill him.
Zhang, from northeast Chinas Liaoning province, suffers fromarare heart ailment - Pentalogy of Cantrell – which hasacomplex series of defects including congenital heart disease and sternum abnormalities.
Posted by Unknown | at 10:58 AM |0comments
တဲ.ခ၀ါသည်( အ၀တ်လျှော်ဖွတ်သူ )အမျိူးဖြစ်လို.ပါ။ဇတ်နိမ်.တဲ.ကောင်လေးကဇတ်မြင်.တဲ.ကောင်မလေး
Patna: A teenage boy was thrashed, paraded through the streets with his head shaved and then thrown underatrain for daring to writealove letter toagirl fromadifferent caste, police said on Thursday.
Fifteen-year-old Manish Kumar was kidnapped by members of the rival caste on his way to school, had his head shaved and was thrown underatrain as his mother begged for mercy, police in the impoverished eastern state of Bihar said.
One man has so far been arrested andapoliceman suspended.
The victim's mother, Lalit Devi, told police she had watched "helplessly" as the train passed over her son.
"The accused persons killed the boy for writingalove letter to the girl of the same village," superintendent of police in Kaimur district, Rajesh Kumar, said by telephone.
Love across caste lines is often violently opposed in India.
Posted by Unknown | at 9:18 AM | 1 comments
နှစ်ဆယ်( ပေါင်စတာလင် ၁၅ သန်း ) အကုန်အကျခံခဲ.တဲ.ပါတီပွဲကတော.လှပဆန်းကြယ်တဲ.
ကမ္ဘာကုန်ကျစားရိတ်အများဆုံးဧည်.ခံပွဲအဖြစ်စားရင်ဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ. 1.5 billion
စတာလင်ပေါင်ကုန်ကျခံတည်ဆောက်ခဲ.တဲ. Atlantis Hotel ရဲ.ဧည်.ခံပွဲကဒီနေ.ကမ္ဘာမှာဖြစ်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံကအဆိုတော် Kylie Minogue ကိုလည်းမိနစ် ၄၀ မျှဖျော်ဖြေဖို.ပေါင်စ
တာလင် ၁.၅ သန်းနဲ.ငှားရမ်းသီဆိုစေခဲ.တယ်။အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို.ဖိတ်ကြားခံရသူတွေ
ကမ္ဘာကစော်ဘွားများ၊ရုပ်ရှင်၊ဖက်ရှင်လောကမှနာမည်ကျော်များ၊ကမ္ဘာ.စီးပွားရေးထိပ်သီးများ၊
အထူးဧည်.သည်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်အတွက်ပင်လယ်ကျောက်ပုဇွန် ၂ တန်၊ဆဲလ်
မွန်ငါးကြပ်တိုက်က ၄၀၀ ကီလို၊ ပင်လယ်ခရုပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ကိုနာမည်ကျော်ထမင်းချက်ပေါင်း
စားပွဲဝိုင်း၂၀၀ အတွက်ပန်းပွင်.ပေါင်း ၁၅၀၀၀ နဲ.ဖယောင်းတိုင်ပေါင်းသုံးထောင်တောင်
ဆောက်ခဲ.ရတဲ.အတ္တလန်တစ်ဟိုတယ်မှာအခန်းပေါင်း ၁၅၀၀ ၊ ကိုယ်ပိုင်ရေကူးကန်ပါတဲ.အခန်း
က ၂၇ ခန်း၊ အရှေ.အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ.အကြီးဆုံးလွှာလျောစီးပန်းခြံ၊ငါးပြတိုက်တို.ပါဝင်ပြီးဝန်
ဒီဟိုတယ်ဟာတောင်အာဖရိက ကဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင် Sol Karznar ရဲ.စိတ်ကူး
Crash, bang, wallop ... whataparty!
More bang for your buck ... fireworks light up the sky around the Atlantis hotel
Sheik on it ... proud night for the owners of the Atlantic super hotel
A SPECTACULAR fireworks show, that organisers said was visible from space, marked the opening of the world’s most expensive hotel this evening.
A GLITTERING array of stars were outshone last night byadisplay ofaMILLION fireworks at the £15million launch party for the world’s poshest resort.
The pyrotechnics at the £1.5billion Hotel Atlantis, on the man-made Palm Jumeirah Island resort in Dubai showed the worldwide credit crunch wasn’t hurting everyone.
It was SEVEN times as big as the display that launched the Beijing Olympics in August and stretched along the 320 miles of Palm Jumeirah, illuminating the Arabian Gulf.
It followedaconcert by KYLIE MINOGUE who was paid £1.5million fora40-minute set.
KYLIE MINOGUE also put onastunning show at the Atlantis hotel,amarine-themed resort built off the Gulf coast on an artificial island shaped likeapalm tree.
The singer – looking gorgeous inasimple floral dress – managed to divert the attention from scruffy caner RHYS IFANS at the bash in the super-clean desert kingdom of Dubai.
Her audience included royalty, business tycoons, sports stars andaWho’s Who of showbusiness.
Actors ROBERT DE NIRO, DENZEL WASHINGTON, WESLEY SNIPES, BEN AFFLECK and RHYS IFANS rubbed shoulders with Hollywood beauties CHARLIZE THERON, MISCHA BARTON and MARY-KATE OLSEN, singing stars DAME SHIRLEY BASSEY and supermodel AGYNESS DEYN.
Virgin boss SIR RICHARD BRANSON chatted to the Duchess of York, while the world of sport was represented by tennis legend BORIS BECKER and basketball superstar MICHAEL JORDAN.
OPRAH WINFREY had to cancel her stay in the £20,000-a-night Bridge Suite because her house was threatened by California’s wildfires. Her room went to “Bollywood’s TOM CRUISE”, SHAHRUKH KHAN.
Actress LINDSAY LOHAN shared her Neptune suite with lover SAMANTHA RONSON, who was DJ at the after-dinner party in her biggest gig to date.
Their luxury room looked on to an 11million-litre open-air marine centre holding 65,000 types of sea life, includingawhale shark.
The 2,000 guests feasted on nearly two tonnes of lobster, 300 kilos of smoked salmon and 4,000 oysters prepared by multi-Michelin starred chefs Santi Santamaria, Michel Rostang, Giorgio Locatelli, celebrity chef Nobu Matsuhisa and 500 cooks.
The 200 dinner tables — decorated with 15,000 stems of carnations — were lit by 3,000 candles.
Tight security surrounded the Dubai Royal family and other VIPs amid fears ofaterrorist attack at what has been called the largest private party in history.
The Atlantis has more than 1,500 suites, 27 spa rooms, the biggest water park in the Middle East,adolphinarium and 3,000 staff.
It was built from scratch — including the island of sand on which it sits — in just four years.
It was the brainchild of South African hotel magnate Sol Kerzner, 73. He already has six five-star resorts.
Last night he told The Sun: “The scale of what we have seen here is appropriate. It cost me $20million for the party but people have to be aware of the scale of this project.
“No famous people were paid to be here and we refused to provide private jets. They came because they wanted to.”
The size: 114 acres or 46 hectares – or 64 Wembley football pitches
The rooms: 1,539, with prices starting at £228 per night forastandard double and rising to £15,000 ( 35,000 S$ )for the Bridge Suite
58,000 km of steel bars were used in the hotel’s construction, more than nine times the length of the Great Wall of China
Posted by Unknown | at 7:00 AM | 1 comments
နိုင်ငံရဲ.တောထဲမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ.ရတယ်လို.သူမရဲ.မိခင် Sylvie ကဆိုပါတယ်။
သူတို.မိသားစုဟာပြင်သစ်ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ.တယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာသူတို.မိသားစုအာဖရိကကိုပြန်ပြီးလည်ပတ်တော. Tippi ကိုရန်မူဖူးတဲ. Cindy
လှပါတယ်။Tippi ဟာအာဖရိကမှာနေစဉ် San လို.ခေါ်တဲ.အာဖရိကလူရိုင်းတွေနဲ.ကြီးပြင်းခဲ.
အခုအသက်ဆယ်.ရှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ. Tippi ဟာပါရီမြို.မှာရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာတက္က
MEET the real-life Mowgli – the little girl who made friends with wild animals.
Just like Rudyard Kipling’s young hero in The Jungle Book, fearless Tippi Degr grew up running free with the beasts.
Elephants, leopards and ostriches treated the tot as one of their own — letting her cuddle them, dance with them and even ride on their backs.
They were captured by her parents, French wildlife photographers Sylvie Robert and Alain Degr, when they lived in Africa.
The family spent ten years travelling the continent.
Cartoon Mowgli ... in Jungle Book with Baloo the bear
Sylvie, 52, who gave birth to Tippi in the wilds of Namibia in 1990, said: My daughter wasavery lucky little girl. She was born and raised almost completely in the wild.
Her story is likeamodern day The Jungle Book, which was turned intoamuch-loved animated movie showing man-cub Mowgli brought up by his wild animal pals in the Indian jungle.
Sylvie always put her tot’s safety first.
She said: Wild animals will either run away or attack you if they are frightened. You must always be on the watch.
Tippi was hurt only twice. Firstameerkat bit her on the nose.
Real wild child ... Tippi aged 12
“Then, in 1994, she was atawater hole withababoon called Cindy.
Cindy attacked Tippi’s hair and pulled outahandful out of jealousy. That was terribly painful.
The family moved to France in 2000 but Sylvie adds: When we returned to Africa in 2006 Cindy ran up to Tippi and played with her hair, grooming her. It was quite beautiful.
Tippi also grew up among the San bushmen of northern Namibia — hunter-gatherers who treated her as one of their own.
Now 18, Africa’s Mowgli has started studying foradegree in cinema at the Sorbonne in Paris.
Sylvie said: My daughter will always be African. Hers is like Mowgli’s story — but Tippi’s is true.
Egyptian man offers Iraqi 'hero' his daughter, 20,...
အမေရိကန်သမ္မတအား ပေါက်သည့် ရှူးဖိနပ်ကို ဒေါ်လာ (၁၀) သ...